Maitiro Ekubvisa hutachiona hweBelly Kubaya - Tora Aya Matipi | Bezzia
Susana godoy | 09/06/2021 12:00 | Runako
Unoziva here nzira yekuuraya hutachiona kuboora kweguvhu? Nekuti ndechimwe chekusahadzika kukuru kunotirova isu patinoita gomba mumuviri uye nezvimwe, mune imwe yakadai seguvhu, iyo tsvina yakakwana inoungana kunyangwe tisingade. Saka, nhasi iwe uchazobuda mune izvo zvese zvinoita kusahadzika.
Kuti tizviratidze, tinofanira kugara tichitevedzera zvakateedzana. Dzese dzinodzivirira hutachiona kubva pakupararira uye dzinotibvumidza kuratidzira dombo redu nekukurumidza sezvazvinogona. Hongu zvirokwazvo, edza zvakare kuteedzera rairo yakapihwa nehunyanzvi kuti ndakazviita kwauri nekuti ikozvino tinotanga neyedu.
1 Chii chandingaite kuti utachiona kuboora
2 Maitiro ekurapa guvhu kubaya
3 Maitiro ekuziva kana kuboora kweguvhu kune hutachiona
Chii chandingaite kuti utachiona kuboora
Isu tatoenda kumberi kuti kuboora guvhu kunogona kutonyanya kunetsa kuchengetedza hutachiona husina hutachiona. Kupfuura chero chinhu nekuti inzvimbo inoungana tsvina mukubwaira kweziso. Saka isu tinofanirwa kunyatsoteerera kwariri uye isu tinodzokorora maitiro acho kakati wandei zuva rega rega.
Kana uchizobata ronda, tinofanira kugeza zvakanaka nesipo nemvura. Asi iyi isina zvinonhuwirira asi zvirinani kusarudza yekusarerekera.
Kune iyo nzvimbo iri kubvunzwa, zvinodawo geza nemvura shoma uye nesipo yakapfava. Kunyangwe iyo yemuviri saline inoratidzwawo. Tinofanira kuimwaya nayo, tichitarisa kuti inonyorovesa gomba zvakanaka here.
Kana zvasvika pakuchenesa, Unogona kufambisa kuboora asi uine hanya kwazvo uye kungoisimudza kana kudzikisa, saka hapana kukanda pakati. Mazuva ekutanga tinofanirwa kuve nechokwadi nezvayo nekuti ndipo patinoida zvakanyanya.
Kana tangochena, tinofanirwa kuomesa nzvimbo asi hatizoshandise matauro kana chero chakafanana. Asi zvirinani gauze uye uchipa zvidiki zvakapfava kubata, kudzivirira kudhonza, nekuti zvinogona kutinetsa.
Maitiro ekurapa guvhu kubaya
Pamusoro pematanho atichangobva kutaura, panogara paine chimwe chinhu chatinofanira kuyeuka nekuti chakakosha zvakadaro. Nekudaro, kana iwe uri kushamisika maitiro ekurapa guvhu kubaya, saka iwe unofanirwa kuziva zvese zvinotevera:
Mushure mekuigeza nekuichenesa, zvakare zvakareraka kuisa mushonga unouraya utachiona, kudzivirira hutachiona hunogona kumuka. Asi usamboshandisa doro pane ronda.
Nedanda kubva munzeve uye yakanyoroveswa mumvura inodziya, unogona kupfava maronda anombobuda. Panzvimbo pekuvadhonza uye kutiita isu ronda rakakura, zvinogara zviri nani kutevera danho iri kuti uvabvise zviri nyore.
Usabvisa kuboora. Iwe unofanirwa kuifambisa sezvataratidza, asi gara uchisiya panzvimbo kunze kwekunge chiremba akurudzira neimwe nzira.
Tiri kutaura nezvechironda chinowanzotora nguva kupora. Saka iwe unofanirwa kumirira mavhiki maviri kana matatu usati waenda kudziva uye kana uchienda, zviri nani kuti uvhare zvakanyanya sezvinobvira, uchichengetedze kure sezvinobvira kubva kune chlorine.
Usapfeke mbatya dzakakamanikana munzvimbo ino futi., iyo inogona kukwikwidza kuchishongo kana kuti inogona kutobatwa. Nekuti majee haana kunaka panguva yekurapa.
Maitiro ekuziva kana kuboora kweguvhu kune hutachiona
Ichokwadi kuti havazi vese vanozowana maitiro akafanana. Asi hongu, kana tichitaura nezvehutachiona mukuboora, isu tiri pachena kuti pane akateedzana ezviratidzo atisingafanire kuregeredza.
Bhatani redumbu rinenge rakatsvuka kupfuura zvakajairwa. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mazuva ekutanga anogona kuve uye pasina hutachiona.
Iwe unozoona kumwe kupisa munzvimbo iyi uye iwe uchaona kumwe kuzvimba.
Uyewo, ukaibata unorwadziwa uye pus yotanga kuita chitarisiko.
Muzviitiko zvatove zvakanyanyisa, inogona kupa fivha shoma, asi zvirokwazvo haina kujairika. Kana zvirizvo, saka unofanirwa kubvunza nachiremba wako.
Panguva dzese unofanirwa kuve nekutsungirira kushoma, nekuti ironda uye zvinogona kutora vhiki kana mwedzi kuti upore zvachose. Iye zvino unoziva nzira yekuuraya hutachiona kuboora kweguvhu!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Maitiro ekudzivirira hutachiona kuboora kweguvhu